कोरोनाले खायो भ्यालेन्टाइन्सका उपहार... :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
कोरोनाले खायो भ्यालेन्टाइन्सका उपहार !
अनुषा अधिकारी काठमाडाैं, माघ २२
भ्यालेन्टाइन्स डे नजिकिँदै गर्दा उपत्यकाका बजार राता गुलाब र झिलिमिली उपहार उपहारले भरिन थालेको छ। विशेषगरी प्रेमी-प्रेमिकाले एकअर्कालाई खुसी बनाउन र आफ्नो माया देखाउन उपहार दिने चलन छ।
काठमाडौंका बजारमा देखिने गुडियादेखि सजावटका सामग्रीसम्म अधिकांश चीनबाट आयात हुन्छ। सस्ता र धेरै प्रकारका आकर्षक सामान भएकाले हाम्रो बजारको उपहारमा चिनियाँ उत्पादनले ओगटेको छ।
तर यो वर्ष यी उपहारको विकल्प केही कम भएको छ। भ्यालेन्टाइन्स डे माग उच्च हुने बेला भए पनि बजारमा सीमित मात्र सामान आयात भइरहेको उपहार बिक्रेताहरू बताउँछन्।
यसको मुख्य कारण हो चीनमा विगत एक महिना अघिबाट आतंक फैलाइरहेको कोरोना भाइरस।
चीनमा महामारी फैलिएसँगै उसको व्यवसाय धर्मर भएको छ। यसको प्रभाव भ्यालेन्टाइन्स डेलाई लक्षित उपहारमा समेत परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। उपहार आयात कम हुनेबित्तिकै काठमाडौंका साना-ठूला उपहार पसलहरूमा भने धेरै प्रभाव परेको छ।
'करिब एक महिनादेखि चीनबाट गिफ्टहरु आउन कम भएको छ,' ए टु जेड गिफ्ट पसलका सञ्चालक सुहान मानन्धरले भने, 'चीनमा कोरोना भाइरस फैलिएको समाचार आएलगतै सामान आयात पनि कम हुँदै गयो। अहिले भ्यालेन्टाइन्समा हुने व्यापारमा असर परेको छ। त्यहाँ भाइरस यसरी नै फैलिने हो भने अबको पाँच-छ महिनै चीनबाट सामान आयात हुने छैन।'
यो वर्षको भ्यालेन्टाइन्स अवसरमा पछिल्ला वर्ष झैं बजारमा नयाँ सामान कम देखिन्छ। गिफ्ट पसलका व्यापारीहरू स्टकमा रहेका सामान बेचिरहेको बताउँछन्। दुई-चार महिना यस्तै हुने हो भने चीनबाट आउने गिफ्ट बजारमै अभाव हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
'मैले त चीनमा भाइरस फैलिएको समाचार आउने बित्तिक्कै सामान अभाव हुने डरले धेरै आयात गरेकी थिएँ,' जावलाखेलस्थित गिफ्ट पसलकी बिक्रेताले भनिन्, 'त्यही पनि अरू बेला जस्तो आएन। थोरै नै आएकाले बजारमा नयाँ उत्पादन कमै छन्।'
सामाजिक सञ्जालमा कोरोना भाइरस बारे फैलिएका हल्लाले पनि सामान आयात हुन ठप्प भएको सुहान बताउँछन्। उपहार सामग्रीहरू कम आउँदा विकल्प कम भए पनि मूल्यमा फरक नपार्ने व्यवसायी सुहान बताउँछन्।
'चीनबाट सामान आउन बन्द भएको खबरले उपहार महँगो हुने हल्ला फैलिएको छ,' उनी भन्छन्, 'गिफ्ट धेरै आवश्यक सूचीमा नपर्ने हुँदा यसको अभावमा पनि मूल्य भने उही हुन्छ। बरू व्यापारीहरूको पूरै भण्डार सकिएला, सामानको मूल्य बढ्ने छैन।'
तर ग्राहकलाई भने जस्ता उपहार छानीछानी दिने मौका नपाएको व्यापारीहरू बताउँछन्।
'ग्राहकलाई भ्यालेन्टाइन्सका बेला भनेजस्तो सामान दिन नसक्दा हामीलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। उहाँहरूले हामीप्रति गरेको भरोषा टिकाइराख्न सक्दैनौं कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ,' जावलाखेलस्थित गिफ्ट पसलका बिक्रेताले भने, 'कोरोनाले यसपालि भ्यालेन्टाइन्सका धेरै उपहार खायो।'
सबै तस्बिरः अनुषा अधिकारी।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६, ०८:४०:००
काठमाडौंमा ४ सहित सोमबार ७८ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रदेश ५ मा थपिए सात संक्रमित, अर्घाखाँचीमा पहिलो पटक दुई जनामा देखियो कोरोना
चार दिनमै कोरोना जितेकी नर्स भन्छिन् ‘नआत्तिनुस्, संक्रमण भए पनि जितिन्छ’
तयारी बिनाका अनलाइन कक्षाले जन्माएका ५ प्रश्न
नेतृत्वको किचलोले जनता समाजवादी पार्टीको एकतामा ढिलाइ
साँखुस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीको कोरोना परीक्षण गर्न टेकु पठाइयो स्वाब
काठमाडौंलाई सिल गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मेयर शाक्यको आग्रह
To my friends in Indian media: I wish there werea'China card' Ameet Dhakal
अतिवादको रापमा सीमा विवाद सञ्जीव पोखरेल
कोरोनाः वैदेशिक रोजगारीमा चुनौती बिमला कोइराला
बन्दाबन्दीः नागरिकप्रति राज्यको जवाफदेहीता सावित्रा ढकाल
हिमाली पुकार प्रकाश तिवारी
को होलान्? सुजन घिमिरे
नक्सा र स्वाभिमान! टंक जोशी